तल फेसबुक बन्द गर्दै Martech Zone
तल फेसबुक बन्द गर्दै
मंगलवार, नोभेम्बर 15, 2011 मंगलवार, नोभेम्बर 15, 2011 Douglas Karr
ममा लज्जित छ, तर म गोपनीयता सेवाहरू, प्रयोग सर्तहरू, वा कुनै अन्य राम्रो प्रिन्ट जस्ता चीजहरूमा ध्यान दिदिन जब मैले आफूलाई सेवामा थपेँ। म सामान्यतया हेर्न पर्खन्छु कि त्यहाँ समुदायबाट प्रतिक्रिया छ कि छैन र त्यसपछि म त्यो अनुसार कार्य गर्दछु। यस विशेष मुद्दाले मलाई मानेको छ, र मलाई थाहा छ मैले के गरेको थिएँ।
My फेसबुक प्रोफाइल जो कोही जडान गर्न मन पराउनुहुन्छ। म एक सामाजिक व्यक्ति हुँ र मँ वास्तवमा कुनै रहस्य छैन (वा तपाईं बाहिर सबै ह्याकरहरु को लागी पैसा), त्यसैले म सबै संग कनेक्ट। यसका लागि मात्र अपवाद बारेमा भू-स्थान उपकरणहरू हुन्। मलाई लाग्छ कि यो डरलाग्दो प्रकारको हो जुन व्यक्तिहरू मलाई थाँहा छैन र म अरू केही राज्य हेरचाहमा बस्छु जहाँ म चेक इन गर्छु।
जे भए पनि, यस अवस्थामा, कसैले मेरो भित्तामा केहि पोस्ट गर्नुभयो जुन जनसंख्याको राम्रो बहुमतको लागि आपत्तिजनक थियो। म विस्तारमा जान सक्दिन ... यो अश्लील थिएन, केवल उनीहरूको विश्वासमा साँच्चिकै बेस्वाद हमला। म कुनै धार्मिक व्यक्ति होइन, तर मसँग ईमानदारी छ जो मानिसहरूलाई अपमान गर्दैनौं हो। विश्वास त्यस्तो चीज हो जुन केवल पवित्र मात्र होइन, हामीले यो पत्ता लगाइसकेका छौं कि मानिसहरू आफैंलाई मार्न आपत्ति जनाउँदैनन्। धेरै व्यक्तिको लागि, उनीहरूको विश्वास तिनीहरूसँग छ। मेरो राय मा, यो एक सँगी मानव को रूप मा कुनै शालीनता को अभाव र यो एकदम सीधा मतलब हो।
केहि मिनेटमा के भयो के थियो कि मानिसहरूले मलाई मित्रैलो बनाएन ... साथै म के हुँ भन्ने कुराको टिप्पणीहरूको महासागरको साथ। (विडम्बना भनेको के हो कि मैले जो उनलाई यो कुरा गरेको थिएँ कि म तिनीहरूमा निराश छु भनेर थाहा दिनुहोस्)। त्यसोभए, मेरो नेटवर्कमा एक व्यक्तिमा कुनै प्रकारको शिष्टताको कमीको कारणले गर्दा मैले मेरो अनुमतिहरू लक गर्नुपर्‍यो। मँ अझै पनी साथीहरुलाई मेरो टाइमलाइनमा पोष्ट गर्न को लागी अनुमति दिइरहेको छु ... तर अरु कसैले पनि जानकारी हेर्न गइरहेका छैनन्। यस पर्दामा पुग्न, तलको एरो क्लिक गर्नुहोस् फेसबुकमा (माथि दायाँ यसै क्षणमा) र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् कसरी तपाइँ जडान गर्नुहुन्छ। मैले अद्यावधिक गरेका दुई सेटिंग्सहरू सर्कल लगाएँ।
त्यहाँ बाहिर तपाईका फेसबुक गुरुहरु, के यसले कुनै सामग्रीलाई मेरो पर्खालमा अर्को व्यक्तिको भित्ताबाट टिप्पणी गरेकोमा रोक्न लगाउँदछ? वा यसले के गर्छ?
टैग: फेसबुकफेसबुक गोपनीयताफेसबुक गोपनीयता सेटिंग्स
Douglas Karr Tuesday, November 15, 2011 Tuesday, November 15, 2011
Th चीजहरू रन-डीएमसीले मलाई सोशल मिडियाको बारेमा सिकायो
डाटासिफ्टको साथ सामाजिक स्ट्रिमहरूको विश्लेषण
त्यो अनुमति परिवर्तनले यी सन्दर्भहरूमा केही परिवर्तन गर्दैन। तपाईंले टिप्पणी गर्दा वा लाइक गर्दा तपाईंका साथीहरूले अझै पनि देख्नेछन्। तपाईंको मात्र विकल्प ती वस्तुहरूमा टिप्पणी नगर्नु हो। Facebook मा हालैका सकल तस्बिरहरू फेसबुकले कसरी काम गर्छ भनेर जानाजानी शोषण हो।
साधारणतया, बेनामीले धेरै नक्कली खाताहरू सिर्जना गर्‍यो, ती सबैलाई एकसाथ जोड्यो, वास्तविक मानिसहरूको गुच्छा थप्यो, एक टन सकल छविहरू अपलोड गर्‍यो, त्यसपछि ती सबैमा लाइक र टिप्पणी गर्‍यो। जब तपाईंले त्यो फोटोमा टिप्पणी गर्नुभयो, यो तपाईंको साथीहरूको भित्तामा चित्रित भएको थियो किनभने यसमा पहिले नै धेरै अन्य टिप्पणीहरू र लाइकहरू थिए। फेसबुकले ठ्याक्कै जसरी काम गरिरहेको छ: सबैभन्दा लोकप्रिय सामग्री फिचर गर्नुहोस् (यदि तपाईंका साथीहरू यसमा संलग्न छन् भने)।
यसको वरिपरि एउटै तरिका भनेको त्यो सामग्रीलाई बेवास्ता गर्नु वा लुकाउनु हो, र यदि तपाईं म जस्तै हुनुहुन्छ भने, आफ्ना अन्य साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् ताकि उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ।
त्यसैले यदि तपाईंले अपमानजनक सामग्री देख्नुभयो भने ... यसमा टिप्पणी नगर्नुहोस्। मद्दतको कदर गर्नुहोस्!
वास्तवमा, म धेरैजसो मानिसहरूले के हेरिरहेका छन् भनेर उल्लेख गर्दैछु: तिनीहरूको समाचार फिडमा रहेको वस्तु। यदि कसैले तपाइँको भित्तामा वस्तु पोस्ट गर्नुभयो भने, त्यो फरक कथा हो। मेरो अनुमान यो हो कि तपाइँ तपाइँको समाचार फिड को सन्दर्भ गर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि। हो?
हो, यो सहि हो Ayokay। मलाई लाग्छ कि मैले अब पर्खाल बन्द गरें।
मैले सधैं मेरो Facebook सेटिङहरू लक गर्न एउटा बिन्दु बनाएको छु। म तपाई भन्दा धेरै विरोधी सामाजिक छैन, तर मैले केहि शंकास्पद व्यक्तिहरूबाट मित्र अनुरोधहरू प्राप्त गर्न थालेपछि मैले यो सुरु गरें। हो, मसँग तपाइँको क्यारियर र दृश्यतामा तपाइँको जस्तो सामाजिक सञ्जालमा लगानी छैन, त्यसैले मलाई एडमबाट नचिनेका हजारौं मानिसहरूले पछ्याउने वा मित्र बनाउने रुचि छैन।
यसबाहेक, मलाई मेरो मुखमा मेरो खुट्टा राख्न कसैको मद्दत चाहिँदैन, म आफैंले त्यो राम्रोसँग गर्न सक्छु।
त्यो कला मैले पनि निपुण बनाएको छु !
पूर्वनिर्धारित स्वचालित लकडाउनमा हुनुपर्छ र सबै गोपनीयता सुविधाहरू फेला पार्न सजिलो बनाउनुहोस्। त्यसपछि व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले चाहेका सुविधाहरू खोल्न छोड्नुहोस्। त्यो एक बेवास्ता वेबसाइट मालिकले गर्नेछ।